Pentagon-ka oo wada qorshe Soomaaliya loogu soo dirayo ciidan gaar ah | KEYDMEDIA ONLINE
Pentagon-ka oo wada qorshe Soomaaliya loogu soo dirayo ciidan gaar ah
Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa wadda qorshe Ciidamada dalkaas dib loogu soo celinayo Soomaaliya kadib markii uu Donald Trump, uu waddanka ka saaray askartii joogtay lix bilood ka hor.
WASHINGTON, USA - Pentagon-ka ayaa diyaarinaya hindise cusub oo la doonayo in tababarayaal ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran Mareykanka, loogu soo diro Soomaaliya si ay Ciidamada Dowladda Soomaaliya uga caawiyaan la dagaalanka kooxda gacan saarka la leh Al Qaacida ee Al-Shabaab.
Tallaabadaan ayaa looga gol-leeyahay in looga laabto go’aankii lama filaanka ahaa ee Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald J. Trump, uu dhamaan ciidamadii USA ee joogay Soomaaliya uu kaga saaray bishii Janaayo ee billawgii sanadkaan.
Proposal-ka uu diyaarriyay Pentagon-ka, wali lama hor gayn Xoghayaha Difaaca ee Lloyd J. Austin III, mana cadda in Madaxweyne Biden uu oggolaan doono qorshahaas, iyadoo la tixgalinayo caqabado kale oo taagan kuwaas oo u baahan dood siyaasadeed oo aan wali xal loo helin.
Tan iyo markii uu Biden yimid Xaafiiska, waxaa is badalay qorshihii howlgallada Mareykanka, waxaana la faray Saraakiisha in aysan weerar qaadi karin iyaga oo aan soo war galin Aqalka Cad, taas oo sababtay in la diido dalabyo ka yimid taliska ciidamada ee Africa, kuwaas oo ahaa in la qaado weerarada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Ku dhowaad Shan bilood ayaa laga joogaa markii ugu danbeysa ee Mareykanku wax duqeymo ah ka fuliyo Soomaaliya, waxaana taas qayb ka mid ah luminta fursadaha u arka Saraakiisha AFRICOM.
Dhanka kale, isku soo wada duuboo dhacdooyinka Soomaaliya, oo ay ka mid yihiin isqabqabsiga siyaasadeed, iyo bixitaanka ciidamada Mareykanka, waxa ay dhiiri galiyeen Al-Shabaab, waxaana dhowrkii bilood ee la soo dhaafay sii xumeyneysay nabad-gelyada, sida ay sheegeen saraakiil sarsare oo Mareykan ah.